November 18, 2020 - Padaethar
November 18, 2020 by Padaethar
ယောက်ျားတွေတောင့်တတဲ့မိန်းမဆိုတာ ယောက်ျား တစ်ယောက်က ပြောတယ်…… (၁) မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဟာ သိပ်ချောသိပ်လှစရာမလိုဘူး။လူကြားသူကြားထဲခေါ်ထွက်လို့ရပြီး အိမ်အပြန်ခေါ်ပြန်လာလို့ရရင် ရပြီ။ (၂) ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့အတိတ်ကို ငါလိုက်မမေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ငါနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက် ငါ့တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ကောင်းကောင်းချစ်ရင် ရပြီ။ (၃) အလုပ်လုပ်ချင်ရင် အလုပ် တစ်ခုရှာလုပ်နိုင်တယ်။ မလုပ်ချင်ရင် အိမ်မှာပဲအိမ်ရှင်မ အဖြစ် ပီပီသသနေ။ နင့်ကို ငါယူရဲရင် နင့်ကိုကျွေးနိုင်တဲ့အား ငါ့မှာရှိတယ်။ (၄) တခြားလူလောက် ငါချမ်းသာချင်မှ ချမ်းသာမယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားလူ နင့်ကိုပေးနိုင်တဲ့အရာ ငါလည်းပေးနိုင်တယ်။ (၅) နင့်အနားမှာ ငါနေ့တိုင်းအဖော်ပြုနိုင်ချင်မှ ပြုနိုင်မယ်။ ဒီအိမ်အတွက် ငါအပြင်ထွက် ရုန်းကန်ရမယ်။ ဒါပေမယ့် ငါ့ဖုန်းဘယ်တော့မှ ပိတ်မထားဘူး… ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် ငါ့ကို နင်ရှာတွေ့နိုင်စေရမယ်။ (၆) သူငယ်ချင်း တစ်သိုက်နဲ့ ငါ … Read more
လူပြောများနေတဲ့ ကိုးတန်း ကျောင်းသူ မိန်းကလေး ၅ ယောက်ဖြစ်ရပ်
လူပြောများနေတဲ့ ကိုးတန်း ကျောင်းသူ မိန်းကလေး ၅ ယောက်ဖြစ်ရပ် ထမင်းစားချိန် ဆိုင်သွားဖို. ဖြတ်လမ်း ကြား ကနေ အဖြတ် ကိုးတန်း ကလေး မိန်းကလေး ငါးယောက် ကို တယောက် စီ ကောင်လေး လေးငါးယောက် လောက် က တွဲပီး လမ်းလျောက်လာ ကြတာ တာတွေ.လိုက်တယ်… မိန်းကလေး တွေ ခြေလှမ်းက ယိမ်းယိုင်နေပီးတော့ လမ်းတောင်ကောင်းကောင်း မလျောက်နိုင်ကြတော့ဘူး .. မိန်းကေ လးတယောက်ဆို အကျီ ကြယ်သီးပါပြုတ်နေတယ် … သူတို.ကို ဘာဖြစ်တာလဲလို. လှမ်းမေးတော့ ကောင်လေး တစ်ယောက်က အစာ အဆိပ်သင့်တာပါလို. လွယ်လွယ် လှ မ်းပြော ပီး သူတို. က ဆက်သွားကြပေမဲ့ စိတ်ထဲ စိတ်မချဖြစ်တာနဲ….. … Read more
မိန်းကလေး တွေ သဘောကျမြန်စေတဲ့ ယောင်္ကျား (၇)မျိုး
မိန်းကလေး တွေ သဘောကျမြန်စေတဲ့ ယောင်္ကျား (၇)မျိုး မိန်းကလေး တွေ ဘယ်လို ယောင်္ကျား မျိုးကို စိတ်ဝင်စားတယ်လို့သင်ထင်ပါသလဲ ၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူညီနိုင်သော်လည်း …. ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ အခုပြောမည့် အချက်တွေရှိတဲ့ ယောင်္ကျား တွေကို ပိုလို့စိတ်ဝင်စားကြပါတယ် ။ သူတို့တွေကတော့ – ( ၁ )ဂီတ တွေနဲ့ကျွမ်းဝင်သူ လူအများစုက ဂီတသံ တွေကိုနှစ်သက်တယ် ။မိန်းကလေး တွေက သံစဉ်တွေကို မြတ်နိုးတယ် ။ ဂီတ ဖန်တီးသူတွေကို မိန်းကလေးအများစုနှစ်သက်လေ့ရှိတယ် ။ ( ၂ )ကားမောင်းကျွမ်းသူ သူတို့အထင်ကြီးစေတဲ့ အချက်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ကောင်းကောင်းအသုံးချတက်ဖို့လိုပါတယ် ။ စိတ်ထင်တိုင်း အပြိုင်အဆိုင်မောင်းနှင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ စနစ်တကျကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်မောင်းတက်တာကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ( ၃ )နည်းပညာ … Read more
အရွယ်ရောက်ပြီး ယောင်္ကျားလေးများ ရေတိမ်မနစ်စေဖို့ …! (မိန်းကလေးများ မဖတ်ရ ၊ MAN ONLY)
ယောက်ျား တွေ လက်မလွှတ်နိုင်သော မိန်းကလေး….
ယောက်ျား တွေ လက်မလွှတ်နိုင်သော မိန်းကလေး (ကျားမ မရွေး ဖတ်သင့်ပါသည်) ယောင်္ကျား တွေ လက်မလွှတ်နိုင်သော မိန်းကလေး ဆိုတာ လောကကြီးမှာရှိပါတယ်။ ဒီစာလေးကို ယောင်္ကျားလေးတွေရော၊ မိန်းကလေး တွေကိုပါ ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ ၀၁. ဥာဏ်ထက်ပြီး သူနဲ့နေရင် ဥာဏ်ရည်တက်လာတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ ဥာဏ်ကောင်းတဲ့ မိန်းကလေး ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ထက်ဥာဏ်ကောင်းလို့ မနာလိုမဖြစ်ပါနဲ့။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဟာ အားသာချက်တွေ တူညီမှုမရှိပါ။ ကိုယ့်ကို တိုးတက်စေမဲ့သူက ဘေးနားမှာ ရှိတယ်ဆိုတာ ဝမ်းသာစရာပါ။ ၀၂. ဘယ်အချိန်မဆိုဘေးမှာရှိပြီး အားပေးနေသူ။ ဘယ်အချိန်မဆိုဘေးနားကနေ အားပေးနေပြီး သူရှိတော့ စိတ်ထဲမှာ တကယ်ကို အေးချမ်းစေပါတယ်။ ၀၃. ကိုယ့်ရဲ့ အားသာချက် ဆိုတာ ဘယ်လဲဆိုတာကို ရှင်းပြပေးသူ။ အမှားလုပ်မိချိန်၊ အလုပ်ကအဆင်မပြေဖြစ်ချိန်၊ အလုပ်သစ်ကို … Read more
“ကံအညံ့တွေ ကြုံနေလား…?လာဘ်ပွင့်ချင်လား…? အမတ်ကြီးဦးပေါ်ဦး လက်ထက်က ယတြာကောင်း”
“ကံအညံ့တွေကြုံနေလား?လာဘ်ပွင့်ချင်လား? အမတ်ကြီးဦးပေါ်ဦး လက်ထက် ကယတြာကောင်း” ZawGyiဖြင့်ဖတ်ရန် ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက် အမတ်ကြီး ဦးပေါ်ဦး အမည်ပေးသော စိန္တကျော်သူဦးသြ၏ “အကြံကုန် ဂဠုန် ဆားချက်ကိန်း” ယတြာ လူတိုင်း အခက်အခဲကြုံလာသောအခါ..အညံ့နှင့်ကြုံသောအခါ…လာဘ်လာဘပိတ်ဆို့နေသောအခါများ တွင်..ဤ ယတြာကို ပြုလုပ်ပါက လက်တွေ့အကျိုးရှိပေသည်။ မည်သူမဆို လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်၍ အကျိုးကျေးဇူးများစေသောနည်းဖြစ်၍ အခက်အခဲများ..အညံ့များ…လာဘ်လာဘပိတ်နေသည်များ ပြေပျောက် ကျော်လွှားနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဗဟုသုတ ရစေရန်နှင့် အဆင်ပြေကြစေရန် ရည်သန်၍ တင်ပြလိုက်ရပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့ မွေးဖွားသူများ…. တနင်္ဂနွေနေ့ မွေးသူများသည် အင်္ဂါနံနှင့်စသော ဘုရားစေတီတစ်ဆူဆူ၏ တနင်္ဂနွေ ထောင့်တွင် ကံကော်ညွန့် (၁)ညွန့် ဘုရားကို ကပ်လှူ၍ အခက်အခဲများ …. အညံ့များ..လာဘ်လာဘပိတ်နေသည်များ..ပြေပျောက်ပါစေ…ကံကောင်းမှုများရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ…လာဘ်လာဘပွင့်လန်းလာပါစေ…ဟုဆုတောင်းပါ။ တနင်္လာနေ့ မွေးဖွားသူများ…. တနလာင်္နေ့ မွေးသူများသည် ဗုဒ္ဓဟူးနံနှင့်စသော ဘုရားစေတီတစ်ဆူဆူ၏ တနင်္လာ … Read more
အိမ်ရှေ့မှာ သတ္တာလေးတလုံးပေါ်မှာ ထိုင်နေလို့ အချိန်ကြာလာတော့ ဘာဖြစ်လို့လဲ ထွက်မေးကြည့်လိုက်​သော်အခါ အိမ်ရှေ့မှာ သတ္တာလေးတလုံးပေါ်မှာ ထိုင်နေလို့ အချိန်ကြာလာတော့ ဘာဖြစ်လို့လဲ ထွက်မေးကြည့်တာ ကိုယ်တောင်ငိုချင်လာတယ်…။ က​လေးဘဝထဲက ​ရွှေပေါက်ကံထဲက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သေးလေးတခုမှာ အလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့တာ ၁၀နှစ်နီးပါးရှိပြီတဲ့…. ဆိုင်တွေ ပုံမှန်ရောင်းရချိန်မှာ ညဉ့်နက်တဲ့အထိခိုင်းပြီး မနက်အစောကြီးထရတာမျိုး မငြီးမငြူလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့ …..။ ထမင်းစားရုံလေး ကျောခင်းတနေရာစာလေးနဲ့သာ ကျေနပ်ခဲ့ရတဲ့….စာမတတ် ပေမတတ် တောက ကလေးတွေကို သက်သက်သာသာဈေးနဲ့ ခိုင်းခဲ့ပြီး …. အခုလိုဆိုင်တွေပိတ်ထားရချိန်မှာတော့ တာဝန်မယူနိုင်ဘူးဆိုပြီး ပြောဆိုမောင်းထုတ်ပါတယ်တဲ့ ….လမ်းပေါ်ထွက်လာရပေမယ့် ပိုက်ဆံလည်း တပြားမှမပါ ….. နေစရာ စားစရာလည်းမရှိ မန်းလေးပြန်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့ ကိုသန်းမင်းကြွယ်တို့ ပုလဲမီးသတ်တွေဆီ အကူအညီတောင်းခဲ့ပေမယ့် …. သူတို့လည်း လူပြည့်နေလို့ တာဝန်မယူနိုင်ပါဆိုလို့ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီလေးငှားပေးပြီး ရွှေပေါက်ကံ Q centre ကို … Read more
ဘာလို့ရှေ့မီးဖွင့်မောင်းရတာလဲလို့ ခနခနလာမေးကြလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်…
ဘာလို့ရှေ့မီးဖွင့်မောင်းရတာလဲလို့ ခနခနလာမေးကြလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့် မိဘပြည်သူများရှင့် ဘာလို့ရှေ့မီးဖွင့်မောင်းရတာလဲလို့ ခနခနလာမေးကြလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့် ကျွန်တော်ကျွန်မတို့က မီးဖွင့်မောင်းဆိုလို့သာ မောင်းလိုက်ရယ်…..ဘာလို့ဖွင့်မောင်းရတာလဲလို့ ကျွန်မကိုမေးမြန်းနေသော ပြည်သူများရှင့်….. ရှေ့မီးအနိမ့်ကို ဘာကြောင့်နေ့/ညဖွင့်မောင်းရလဲဆိုရင် အဓိကရည်ရွယ်ချက်က. ယာဉ်အန္တရာယ် လျော့ကျစေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်ရှင့်….. ကုန်တင်ကားအများစုဟာ ကားကိုယ်ထည်နှင့်အမြင့်ထက်ကျော်လွန်ပြီးကုန် ပစ္စည်းတင်​ဆောင်လာကြတဲ့အခါ နောက်မြင်ကွင်းကျဉ်းတတ်ပါတယ် …. အဲဒီလို နောက်မြင်ကွင်းကျဉ်းတဲ့ ကုန်တင်ကားမျိုးကို မိမိမောင်းနှင်းလာတဲ့ ဆိုက်ကယ်က ကျော်တက်တဲ့အခါမျိုးမှာ မိမိအချက်ပေးတဲ့ ဟွန်းသံက်ို မကြားရဘဲ ….. မိမိကျော်တက်ဖို့ ယူထားတဲ့ ဘယ်ဘက်ယာဉ်ကြောကို ကုန်တင်ကားက ယာဉ်ကြောပြောင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ ယာဉ်တိုက်မူ ဖြစ်စေန်ိုင်ပါတယ်ရှင့်….. အဲသလို ကားမျိုးနဲ့ကြုံဆုံရတဲ့အခါ မိမိက ရှေ့မီးအနိမ့်လေးဖွင့်မောင်းလာရင် မိမိရဲ့မီးရောင်းကို ကားသမားမြင်ပြီး ယာဉ်ကြောမပြောင်းခဲ့ရင် ယာဉ်တိုက်မူမဖြစ်နိုင်ပါ…. နောက်တစ်ချက်က ဇိမ်ခံကားမောင်းနှင်လာကြတဲ့သူ လူအများစုဟာ ကားကိုမှန်အလုံပိတ် အဲကွန်းဖွင့်/သီချင်း နားထောင်ရင်း ကားမောင်းလာမိတဲ့အခါ … Read more
မိန်းကလေးများလက်မတွဲသင့်သော ယောက်ျားယုတ် ( ၁၀ )မျိုး
မိန်းကလေး များလက်မတွဲသင့်သော ယောက်ျားယုတ် ၁၀ မျိုး ၁။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို ချစ်ပါတယ်ပြောပြီး နောက်ကွယ်ကျ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ယောက်ျား ၂။ ပျင်းမှဖုန်းဆက် သူစိတ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ဆို အဖတ်မလုပ် ရှိတယ်လို့တောင်မထင်တဲ့ယောက်ျား ၃။မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတာဝန်ယူချင်စိတ်မရှိသောယောက်ျား ၄။မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အရှက်နဲ့သိက္ခာကိုမငဲ့ကွက်ဘဲ ယုတ်ညဲ့စွာပြောဆိုတတ်သောယောက်ျား ၅။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုပျော်တော်ဆက်တစ်ယောက်လို သဘောထားတတ်သောယောက်ျား ၆။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ရန်ဖြစ်လျှင် လက်ပါတတ်သောယောက်ျား ၇။ ကိုယ့်စိတ်ပျော်ဖို့အတွက်ဘဲကြည့်ပြီး မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကိုဘယ်တော့မှငဲ့မကွက်တတ်သောယောက်ျား ၈။ ကတိမတည်သောယောက်ျား ၉။ ဘဝအိပ်မက်နှင့်မျှော်မှန်းချက်မရှိသောယောက်ျား ၁၀။ ပြဿ…..နာတစ်ခုကို ခေါင်းရှောင်တတ်သောယောက်ျား…….. တို့ကိုတော့ ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ Credit -ဖိုးသူတော် unicode မိနျးကလေး မြားလကျမတှဲသငျ့သော ယောကျြားယုတျ ၁၀ မြိုး ၁။ မိနျးကလေး တဈယောကျကို ခဈြပါတယျပွောပွီး နောကျကှယျကြ ဖောကျပွနျတတျတဲ့ယောကျြား ၂။ … Read more